प्रकाशित: चैत्र ११, २०७७ बुधवार
प्रेममा परेको ब्यक्तिले देखाउँछ यि भिन्न भिन्न लक्षण , यसरी सकिन्छ सजिलै चिन्न, जान्नुहोस् यो रोचक तथ्य
एजेन्सी- प्रेममा नपर्ने मानिस यो संसारमा शायदै होलान् । प्रेममा परेको मानिसको चालढाल नै फरक हुन्छ । महिला वा पुरुष दुवैको व्यवहार प्रेमले परिवर्तन गरिदिन्छ । यहाँ हामी प्रेममा परेका केटाहरूले कस्तो लक्षण देखाउँछन् बताउँदैछौं
सुन्दरी युवतीलाई प्रभावमा पार्न चाहानुहुन्छ ? तपाईमा हुनुपर्छ यस्ता गुणहरु
काठमाडौं । महिलाहरु चाहन्छन् आफुले संगत गर्ने पुरुष संस्कारी र सहयोगी होस् । प्राय महिलाहरुले मिजासिलो, इमान्दार र सहयोगी पुरुषसंग संगत गर्न चाहेका हुन्छन् । त्यति मात्रैले हुन्न महिलालाई प्रभाव पार्न कस्तो गुण हुनुपर्छ हेरौं
यो हो नेपालमै १० वर्षदेखि लगातार दुध दिइरहेको अचम्मको गाई
काठमाडौं । सिरिजंगा गाउँपालिका ४ तेल्लोकका जनक खड्काले पालेको साँखु गाईले नौ वर्षदेखि लगातार दूध दिइरहेको छ । २०६९ भदौमा अन्तिम पटक सुत्केरी भएको गाईले त्यसअघि पाँच बेतसम्म प्रत्येक वर्षजसो गर्भधारण गरेको थियो । २०६९ सालपछि
एउटी युवतीका २ जना श्रीमानको जम्काभेटमा पर्यो चर्काचर्की, अर्कै संग ६ महिना बसेकी श्रीमती फेरी ल्याउनुको यस्तो रहस्य (भिडियो)
झापा । बैदेशिक रोजगारीको क्रममा कमाएको सम्पत्ति कुम्लाएर पूर्व श्रीमानसँग भागेपछि पाँचथरको मिक्लाजुङ–१ का हिमाल राई न्यायको खोजीमा भौतारिएका छन् ।दुबईमा रहँदा सामाजिक सञ्जामा चिनजान भएर विवाह गरेका हिमाल यतिबेला न्याय खोजिरहेका हुन् ।श्रीमान भूपाल
दुनियाकै यो अनौठो भेडो, बिरामी र अशक्त अवस्थामा फेला परेको भेडाको रौँ का ट्दा मात्रै ३५ किलो तौल घट्यो
बिबिसी । रौँ काट्दा ३५ किलो वजन कम भएको भेडो देख्नु भएको छ रु आज हामीले यो अनौठो भेडोको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ । अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा फेला परेको एउटा भेडाको ३५ किलो का टि एपछि त्यसले
संसारकै बृद्ध प्रहरी अधिकारी, जो ९१ वर्षको उमेरमा पनि गस्ती गर्छन्, हेर्नुहोस् यो भाइरल भिडियो
बिबिसी । अमेरिकाको सहरमा ९१ वर्षीय प्रहरी अझै गस्ती गर्छन्एलसी ुबक्शटु स्मिथ अहिले ९१ वर्षका भए। उनी झन्डै ५६ वर्षदेखि अमेरिकाको प्रहरी सेवामा कार्यरत छन्। उनी आर्कान्सास्थित एउटा सानो सहरमा बस्छन्। उनी अमेरिकामा कार्यरतमध्ये एक पाका
दुई हजार वर्ष पुरानो 'कम्प्युटर' को रहस्योद्घाटन गर्न वैज्ञानिकहरू सफल भए, हेर्नुहोस् यो तथ्य
बीबीसी । वैज्ञानिकहरूले कम्प्युटर मोडलिङको सहायतामा प्राचीन ग्रीक उपकरणको जटिल गिअरिङ प्रणालीको प्रारूप तयार पारेका छन् . संसारकै सबैभन्दा पुरानो "कम्प्युटर" को सङ्ज्ञा दिइएको एउटा २,००० पुरानो यन्त्रले कसरी काम गर्थ्यो भन्ने गुह्य पत्ता लागेको
सँसारकै यस्तो अनौठो कुण्ड जहाँ अगाडी गएर ताली बजाए मागेको पुरा हुने विश्वास
एजेन्सी । ताली बजाउँदा पानी तालबाट माथि उठेको देख्नु भएको छ रु यो रोचक प्रशंग हो भारतको झारखण्डस्थित बोकारो जिल्लाको यो एक कुण्डको । यो कुण्डको रहस्यमय विशेषता यस्तो छ कि जब तपाइँ यो कुण्डको
कुनैपनि व्यक्तिको मृ त्युपछि उसको फेसबुक अकाउन्ट के हुन्छ ? फेसबुकबारे जान्नुहोस् तपाईलाई थाहा नभएका यि रोचक तथ्यहरु
एजेन्सी अहिले प्राय ब्यक्ती सामाजिक संजालमा ब्यस्त हुन्छ भने त्यो संजाल हो फेसबुक । फेसबुकले हरेक ब्यक्तिलाई एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ सजिलै नजिक भएको महसुस गराएको सबैलाई अनुभुत हुन्छ । सायत त्यसइको उपज होला
यो हो टाउको कालो र शरिर पहेलो भएको अनौठो सर्प
एजेन्सी । तपाई हामीले गाउँ घरमा देखेका सर्पहरु सलल जमिनमा हिँड्छन् । तर दुनियामा यस्ता पनि सर्पहरु छन् जो सहजै उड्न सक्छन् । दक्षिण–पुर्वी एशियामा, दक्षिण चीन, भारत र श्रीलंकामा पाइने क्रिसोपिली जीजस नामक सर्प
हात्तीको छावाले नुहाएको भिडियो शेयर गरेको केहि घण्टामै धेरैले रुचाए, आखिर के छ यो भिडियोमा खास त्यस्तो ?
काठमाडौँ । बाथटपमा प्राय मानिसहरुले नुवाउँछन् । तपाईले कहिल्यै हात्तीको छावा पानीको टबमा मजाले नुहाएको देख्नु भएको छ ? पानीमा मज्जाले खेल्दै गरेको नुवाउँदै गरेको एउटा हात्तिको छावा सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । भिडियोमा टब